Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ibu ọnụ na-akpata ịmaliteghachi mkpụrụ ndụ - Afrikhepri Fondation
Fraịdee, julaị 30, 2021
Ọgwụgwọ na-ebu ọnụ
Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta na ibu ọnụ na-eme ka ndụ dịghachi ndụ
Na-agụ: 5 mins
Un ọtụtụ usoro ahụike ndị agadi na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ugbu a ihe akaebe mbụ nke na-eme ka ihe dị n'ime mkpụrụ ndụ ihe na-eme ka ọ dịghachi ndụ n'ime mkpụrụ ndụ ma ọ bụ usoro.
Ndị nyocha na Mahadum Southern California bipụtara ọmụmụ ahụ. Nnyocha na-egosi na usoro ịgba ọsọ ogologo oge na-echebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ pụọ na mmebi ma mee ka usoro ọgwụgwọ ahụ dịghachi ọhụrụ. Ha kwubiri na ibu ọnụ na-agbanwe sel ndị na-ehi ụra gaa n'ọnọdụ nke imeghari onwe.
Emeela nnwale ọgwụgwọ ụmụ mmadụ site na iji ndị ọrịa nọ n'ọgwụ. Ruo ogologo oge, ndị ọrịa anaghị eri nri, nke mere ka ọbara ọgbụgba ọbara ọcha ha belata. N'ime ụmụ oke, usoro ịgba ọsọ na-eme ka usoro mmegharị ahụ gbanwee, na-agbanwe ụzọ mgbaàmà nke mkpụrụ ndụ ọbara ọbara hematopoietic, bụ nke na-akpata ọbara na usoro mgbochi.
Anyị enweghị ike ibu amụma na ibu ọnụ ogologo oge ga-enwe mmetụta dị ịrịba ama dị otú ahụ n'ịkwalite ịmaliteghachi ịmalite sel nke usoro hematopoietic. Mgbe agụụ na-agụ gị, sistemụ ahụ na-agba mbọ ịchekwa ike, otu n’ime ihe o nwere ike ime iji chekwaa ike bụ ịm ụta ọtụtụ sel ị na - alụso ọrịa ọgụ na - achọghị, ọkachasị ndị nke nwere ike mebie. Ihe anyị malitere ịchọpụta n’ime mmadụ na oke bụ na ọnụọgụ sel ọbara ọcha dị n’ọbara na-ada ngwa ngwa ruo ogologo oge. Mgbe ị na-eri nri ọzọ, mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na-alọghachi.
Ọzọkwa, n’ihi na ibu ọnụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ ọbara ọcha dị n’ọbara n’ụzọ dị ukwuu, ọ na-eme ka imu mkpụrụ ndụ ọhụrụ nke sel na-alụso ọrịa ọgụ gbanwee. Nke kachasị mkpa, ọ na-ebelata enzyme PKA, nke ejikọtara na ịka nká, ọganihu tumo, na kansa. Ọ dịkwa mkpa ịkọwa na ibu ọnụ na-echebe megide nsị na ọnwụnwa na-agagharị n'ụlọ ọgwụ ebe ndị ọrịa buru ọnụ maka awa 72 tupu chemotherapy.
Ihe anakpo Chemotherapy na emebi oke usoro mmebi nke usoro oria. Nsonaazụ ọmụmụ a na-egosi na ibu ọnụ nwere ike belata ụfọdụ mmetụta na-emerụ ahụ nke chemotherapy.
Ibu ọnụ bụ ọdịnala nke bụ akụkụ dị mkpa n'ọtụtụ ọdịnala oge ochie, site na Vedic ruo Buddhist na ndị ọzọ, ibu ọnụ ekwesịghị ịbụ nke agụụ na agụụ. Ọ bụ usoro nke igbochi onwe gị na ịchịkwa ahụmịhe nke iri nri na n'otu oge ahụ ijide n'aka na ị na-eme ya. Mgbe m na-ebu ọnụ, m na-emekarị ngwa ngwa mmiri ma na-eme nke a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asatọ ugbu a ma na-enwe mmetụta dị mma ma nwee ume mgbe m mechara ya.
Ịgba ọsọ na - enyere aka ichebe ọrịa ụbụrụ:
Ndị nchọpụta na National Institute of Aging na Baltimore achọpụtala ihe akaebe na ibu ọnụ maka otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ n’izu nwere ike igbochi mmetụta nke ọrịa Alzheimer na ọrịa Parkinson. Nnyocha achọpụtakwala na belata calorie 500 kwa ụbọchị maka ụbọchị abụọ n'ime ụbọchị asaa nwere ike igosi uru bara ụba maka ụbụrụ.
Ibu ọnụ na-ebelata ihe ize ndụ gị nke ọrịa obi na ọrịa shuga
Inwe ụbọchị na-enweghị nri na-ebelata ihe egwu gị nke ọrịa obi na ọrịa shuga. Nnyocha na-egosi na ibu ọnụ na-ewepụta nnukwu mmụba na hormone nke uto mmadụ, nke jikọtara ya na imezi ngwa ngwa metabolism na abụba na-ere ọkụ. A maara abụba ọkụ iji belata ọrịa obi na ọrịa shuga. Ndị dọkịta bidoro ịtụle ibu ọnụ dịka ọgwụgwọ.
Ibu ọnụ na-agwọ ọrịa kansa na mkpụrụ ndụ mmadụ:
Otu nnyocha sitere na Scientific Journal of Aging chọpụtara na ndị na-arịa ọrịa kansa bụ ndị gụnyere ibu ọnụ na ọgwụgwọ ha nwere mmetụta dị ole na ole site na ọgwụgwọ ọgwụ. Nyocha niile emere ugbu a na-egosi na ibu ọnụ na-eme ka ndụ dịkwuo mma, na-ebelata uto tumo ma na-egbochi mgbasa nke etuto ahụ. National Institute of Aging na-amụkwa ụdị ọrịa ara ure n'ụzọ zuru ezu iji ghọta nke ọma mmetụta nke ibu ọnụ na ọrịa kansa. Mgbe ha buchara ọnụ, mkpụrụ ndụ nke kansa gbalịrị imepụta protein ọhụrụ ma were usoro ndị ọzọ iji nọgide na-eto ma na-ekewa. Site na usoro ndị a, nke mechara bute ọtụtụ usoro ndị ọzọ, emepụtara mkpụrụ ndụ mebiri emebi bụ nke mebiri DNA mkpụrụ ndụ nke kansa wee bute mbibi ha. Ọ bụ cell na-egbu onwe ya, cell cancer na-anwa iji dochie ihe niile na-efu n'ime ọbara na ọ chọrọ iji dịrị ndụ mgbe oge nke ibu ọnụ, mana enweghị ike. N'aka nke ya, ọ na-agba mbọ ịmepụta ha na nke a na-eduga na mbibi nke ya.
Ọzọkwa, jide n'aka na ịme nyocha gị tupu ịnwale nke a. Olileanya na nke a nwere ike ime ka ị gaa n'ihu iji lelee okwu ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ezie.
Ma ọ bụrụ na anyị akwụsị iri ntakịrị, site n'oge ruo n'oge
Zụta € 15,60
The Complete Guide to Fasting (Ndụmọdụ Ndị Bara Uru)
Zụta € 16,99
Na-ebu ọnụ: Azọ Okike nke Ahụike na Ogologo
Zụta € 11,99
Ibu Ọnụ na Homelọ: Ntuziaka bara uru iji mee ngwa ngwa ma ọ bụ ọgwụgwọ detox
2 ọhụrụ site na .10,04 XNUMX
2 ejiri site na € 6,05
Zụta € 10,04
Na-ebu ọnụ (Ọkachamara ndụmọdụ)
Zụta € 5,49
Na-ebu ọnụ - ultrazọ a na-ebu ọnụ nke na-ebu ọnụ nke na-eme ka mmadụ felata ma dịrị ndụ ...
Zụta € 7,99
Na-ebu ọnụ akwụkwọ ndetu
Zụta € 13,03
Ibu onu - Uzo di nma n’aru aru na uche
6 ọhụrụ site na .25,00 XNUMX
29 ejiri site na € 15,98
Zụta € 25,00
Nka nke Ibu onu: Buchinger Theingpeutic Manual Manual
8 ọhụrụ site na .24,50 XNUMX
8 ejiri site na € 17,97
Zụta € 24,50
Na-ebu ọnụ, usoro ọgwụgwọ ọhụrụ?
Zụta € 18,99
Emelitere ikpeazụ na July 30, 2021 12:57 am
AHỤTA: Kwụsị ụgha
Akwụkwọ ndetu nke odeakwụkwọ 6
Nka bu ibido - Guy Kawasaki (Audio)
Doumbi Fakoly, n'etiti Chineke, ndi nna ochie na omenala (Video)
African American mepụtara ụzọ mgbanwe iji mee ka mmiri emetọ mmanụ dị ọcha
Ozizi nke Eckhart Tolle